အာဏာသိမ်းဖို့ အခွင့်သာလေပြီလော? | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ကာချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၁၉ ကြိမ်တိုင် အာဏာသိမ်းဖူးသော ထိုင်းနိုင်ငံကို
သဘောကျလွန်းသည်ဟု သူ၏ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဇန်နာဝါရီလ ၉ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလည်ပတ်
မထွက်ခင် ကာကွယ်ရေးရုံတွင် ပြောကြားဘူးသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှ ကြိမ်ဖန်တေသော
နိုင်ငံတကာမှ ထောက်ခံသည့် အာဏာသိမ်းမှုမျိုးသို့ မင်းအောင်လှိုင်တို့ သွားချင်ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ လိုအပ်သလိုအာဏာသိမ်းပြီး မိမိတို့လိုချင်သော နိုင်ငံရေးပုံစံသို့သွားနိုင်စေဖို့အပြင် နိုင်ငံတကာမှ မဆုတ်မယုတ် ထောက်ခံအားပေးသော မိမိတို့၏ဆောင်ရွက်မှုအား ထာဝရ
အသက်ဝင်စေရန် မင်းအောင်လှိုင်တို့ အကြီးကျယ်ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
အာဏာသိမ်းရန် ကိစ္စမှာ အလွန်ပင် မလွယ်လွန်းလှပေ၊ အာဏာသိမ်းရန်အတွက်(1) စမ်းသပ်မှု၊(2) စိန်ခေါ်မှု၊ (3)အကွက်ရိုက်မှု၊(4) ဖန်တီးမှု၊(5) လုပ်ကြံမှု၊(6) ထိန်းချုပ်မှု။(7) ဦးတည်မောင်းနှင်နိုင်မှု ဆိုသော အချက်ကြီး (၇)ချက်နှင့်ပြည့်စုံမှသာလျှင် အာဏာသိမ်းရန် အဆင်ပြေနိုင်သည်။
အာဏာသိမ်းရန် ပထမအရေးကြီးသော ဌာနမှာ ပြည်ထဲရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဌာနဖြစ်သည်။
အာဏာရှင်ဟောင်းဦးနေ၀င်းက တိုင်းပြည်အား လိုအပ်သလိုအာဏာသိမ်းနိုင်ရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါဝင် ပြည်ထဲရေ၀န်ကြီး နှင့် အဖွဲ့အား ၁၉၈၈ ဇွန်လတွင် အရေးပေါ်အစည်းဝေးခေါ်
ယူခဲ့သည်ကို The Guardian သတင်းစာက ရေးသားဖေါ်ပြသည်။ထို့နောက် တိုင်းပြည်အာဏာ
မသိမ်းခင်း စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ကြလေသည်။ ပြည်ထဲရေးဌာနအောက်တွင်ရှိသော ရဲ နှင့်
လုံထိန်းများ မည်မျှ အမိန့်နာခံမှုရှိမရှိအား စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသားပြည်သူများအား
နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အမိန့်နာခံမှုကို ဆန်းစစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့၏
လက်နက်ကိုင် ရဲ ၀န်ထမ်းများမှ တသွေမတိမ်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပါက အမိန့်နာခံမှု
အောင်မြင်သော အဆင့်သို့ ရောက်သည်ဟု ကောက်ချက်ချလေ၏။ ယခုတွင်လည်း
မင်းအောင်လှိုင်တို့မှ အမိန့်နာခံမှုအား ဆန်းစစ်သည့်အနေဖြင့် လက်ပံတောင်း၊ မအူပင်
နှင့် အခြားသော ဒေသအလိုက်တွင် ရှိနေကြသော ရဲဝန်ထမ်းများအား အမိန့်နာခံမှုအား
တဆင့်ပြီးတဆင့် စမ်းသပ်နေကြသည်မှာ အောင်မြင်သလောက်ဖြစ်နေလေသည်။
အာဏာသိမ်းမှုများတွင် မလွဲမသွေတွေ့ကြုံရသော ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ စိန်ခေါ်မှုများအား
ရင်ဆိုင်ရလေသည်ကို မင်းအောင်လှိုင်တို့ သိကြ၏၊ ပြည်တွင်းစိန်ခေါ်မှုတွင် လူထုအုံကြွမှု
နှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီး၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်လာကြမည်ဖြစ်သော
အနေထားအား ဆန်းစစ်ကြသည်။ ပြည်မအလယ်ခေါင်တွင် ရဲ၊ထောက်လှမ်းရေးနှင့်
သတင်းပေးများအပါဝင် လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်အတော်အသင့်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော်ငြား
နယ်ချင်းထိစပ်သော ဒေသများတွင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ပုန်ကန်သော အင်အာစုများအား
ချက်ခြင်း ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်ရန် အလွန်ခက်သောကြောင့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ အာဏာမ
သိမ်းခင်ကာလတိုလေးမှာပင်တိုင်းရင်းသာနယ်မြေများသို့ ကြီးမာသော ခေတ်မှီလက်နက်များ
တပ်ဆင်ထားသည့် စစ်အင်အားများကို ပို့လွှတ်ထိန်းချုပ်သည့်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းယမ်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲထိုးစစ်များ ဆင်နွဲနေပြီး ၊ အချို့တိုင်းရင်းသားဒေသများအား
ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားရေးဆိုသော အသွင်များဖြင့် ဆွဲဆောင်ကိုင်တွယ်ခဲ့ကြသည်။
ယခုတွင်လည်း တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းများနှင့် အတော်တန်ပင် အလျှင်းသင့်နေကြပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ မလှုပ်သာ မပြောသာအခြေနေသို့ရောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထား
ကြပြီး၊ ပြည်မမှ ထွက်ပြေးကာ နယ်စပ်တွင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်း တော်လှန်နိုင်သော
အခြေနေသို့ မရောက်လေအောင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုခရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF)ကိုပင် အခြေပြုတ်အောင် လှည့်ကွက်စုံဖြင့် အကုန်ရှင်းထုတ်နေသော အနေထားကို
တွေ့ရသည်။ (ABSDF) အင်အားအတော်တန်မြင့်မားအားကောင်းလာသော ကချင်ဒေသအား
ခဲတလုံးနှင့် ငှက် ၂ ကောင်ကို တခါတည်း ပြုတ်ကျအောင် ထိုးစစ်များ မရပ်တန့်ပဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်မှာ လုံးလုံးမရိုးသားသော အကြံစည်သစ်အတွက် ချီတက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူများ မည်မျှ တော်လှန်ပုန်ကန်လိုသော ဆန္ဒအား သိလာစေရန် ပြည်သူများအား ထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ချိမ်းခြောက်ခြင်း မတရားလုပ်ပြခြင်း လစ်လျူရှု့ခြင်း အဓမ္မကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများအား ထုတ်သုံးပြခြင်းများဖြင့် ပြည်သူများဘက်မှ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လာမှုများအတွက် စနစ်တကျ အကွက်ချကာ အရေးခင်းငယ်လေးများအား ဖန်တီးပေးသည်။ ယခု ရခိုင်ဒေသ၊ လက်ပံတောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း စသောစသောနေရာများတွင် ငါးပွက်သကဲ့သို့ ပွက်ထမှုများအား ဖန်တီးကာ အကွက်ရိုက် စမ်းသပ်လေသည်။
ပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသား လယ်သမား အလုပ်သမား ၊ သံဃာတော်များနှင့် လူတန်းစားအလွှာ
အသီးသီးတို့အား စည်းလုံးညီညွတ်မှုအား မည်မျှရှိသည်ကို စမ်းသပ်မှုများဖန်တီးလေသည်။
လက်ပံတောင်းအရေးခင်းတွင် သံဃာတော်များ၏ စည်းလုံးမှုတချို့နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ
သမားများစည်းလုံးမှုတို့သည် မင်းအောင်လှိုင်တို့ အဖို့ သတိထားစရာဖြစ်ခဲ့ရသည့်အပြင် ယခု
အောင်မင်းတို့နှင် တွေ့ဆုံနေသော UNFC ဟုခေါ်သော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများဖယ်ဒရယ်
ကောင်စီ၏ စည်းလုံးရေးအနေထားများကိုလည်း တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် ကချင်ဒေသစစ်ပွဲအပါဝင် ရှမ်းဒေသများအား စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်ပြခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင် အချင်းချင်း သဘောထားကွဲလွဲရေးများဖန်တီးပြီး ပါတီများအားနည်းလာအောင်ဖန်တီးနေကြသည့် အပြင်၊ တိုင်းရင်းသားနှင်
့ ပြည်မတွင်းမှ ပြည်သူများမည်မျှအတွေးမြင်တူညီကြသည်ကို မီဒီယာ နာမည်တုများနှင့် မဟုတ်မ
မှန် သတင်းဖြန့်ထုတ်ကာ စမ်းသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပြီး တိုင်းရင်းသားများ ပြည်မနှင့် ပြည်ပ
အတိုက်ခံတို့ အချို့သော အယူဆကွဲလွဲမှုများတွင် မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘက်က
အာဏာလွယ်ကူချောမွေ့စွာသိမ်းယူနိုင်ရန် လုပ်ကြံမှုသည် ရှေးယခင်ကပင် ထွန်းကားခဲ့သည်။
ယခုလုပ်ကြံမှုတို့သည်ကား ရှေးယခင်က လုပ်ကြံမှုများနှင့် အလွန်ခြားနားကွဲပြားလေသည်။
အတိုက်ခံများ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများအတွင်း ဖြုတ်ထုတ်၇ှင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင်
ဖန်တီးသော လုပ်ကြံမှုများအပါဝင် နေပြည်တော်တွင်လည်း ၀န်ထမ်းများ ၀န်ကြီးများအား
အနားပေးခြင်း ရာထူးမှ ဖယ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်း မပြီးဆုံးနိုင်သော တရာစီရင်ရေးများဖြင့်
ဖန်တီးဖယ်ထုတ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်သော အမိန့်များဖြင့် ဖယ်ရှားပြသပြီး ပြည်သူ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် နိုင်ငံတကာမှဝေဖန်မှုများပပျောက်ကာ၊ယုံကြည်မှုများရအောင်ဆောင်ရွက်ပြသလာ
ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် ကိုယ့်လူသူ့ဖက်သို့ ထိုးသွင်းသော နည်းဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီးများအတွင်းသို့၎င်း လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့အပါဝင် သံဃာတော်များအကြားတွင်းသို့ ပုံစံပေါင်း ထောင်သောင်းများစွာဖြင့် မင်းအောင်လှိုင်တို့နှင် ၄င်းတို့၏ အားပြုပါတီ ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်များအား အသုံးချကာဆောင်ရွက်နေပြီး လိုအပ်လာသည်နှင့် ချက်ခြင်းထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အစီမံများပြုလုပ်နေသည်မှာ အတော်ပင် ထင်ထင်ရှား၇ှား သိသာလာသည်၊ ကြံ့ဖွတ် ဘောင်းဘီချွတ်များနှင့် စစ်ဝတ်များ လွှတ်တော်ထဲတွင် အသာစီးနေရာယူထားခွင့်အား နိုင်ငံတကာက လက်ခံအောင် အခြားသော အရပ်ဝတ်များဖြစ်သည့်
အရပ်သားလွှတ်တော် အမတ်များအား စနစ်တကျ ကြိုးကိုင်ထားနိုင်နေသည်။ ကြံဖွတ်
လွတ်တော်အမတ်များ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ကြံဖွတ် ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်ဆောင်များက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တံခါးမရှိ ဓားမရှိ အချိန်မရွေးတွေ့ဆုံ ၀င်ထွက်နေမှုများပြုလုပ်လာ
နေကြသည်။ အဆိုပါအချင်းရာသည် မင်းအောင်လှိုင်တို့အဖို့ ပိုကာပိုကာ အသာစီးရနေ၏၊
ဦးတည်မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ အလွန်ပင်အရေးကြီးသော ကိစ္စဖြစ်လေသည်။ ဦးတည်မောင်းနှင်
နိုင်ငံတော် လက်ရှိဘဏ္ဏာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံတော်ငွေ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ထားနိုင်မှု၊
သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတို့ဖြစ်၏၊ ၁၉၈၈
အာဏာသိမ်းချိန်က နေ၀င်းနှင့် ဆွေးနွေးအကွက်ချခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များ ထိုကဲ့သို့
မစဉ်းစားသောကြောင့် နိုင်ငံတော် အာဏာသိမ်းပြီးသောကာလ၀ယ် ၀န်ထမ်း ယန္တယားပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် အခက်ခဲများစွာကြုံတွေကြရပြီး တရုတ်အား ချေသလုံးသွားဖက်ခဲ့ကြရသည့် အပြင်
၄င်းတို့ ချဉ်းကပ်ငွေချေးလို့ ရနိုင်မည်ဖြစ်သော ဥရောပနှင့် အာရှနိုင်ငံများထံ အောက်ကျ
နောက်ကျခံကာငွေချေးခဲ့ရသည့် သင်ခန်းစာများရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး
အားနည်းအကျဉ်းတန်မှုများကြောင့် အတိုက်ခံပြည်သူဘက်က အားသာခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတကာမှ
ဝေဖန်မှုများ နှင့် စီးပွါးရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအား ဒီရေတက်သကဲ့သို့ အကြိမ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ကြုံ
တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် ယခုအခါ အတိုက်ခံများကို ပွဲထုတ်၊ပွဲလန်းများလုပ်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုများ အရှင်းပပျောက်အောင် အဖက်ဖက်က ကြိုးစားလာပြီး စစ်ရာဇ၀င်လူဆိုးကြီးများ
ခိုးခဲ့သုံးခဲ့သော ကြွေးမြီများအားလုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၉)ထောင်ကျော် လျော်ပစ်လာ
အောင် ဆောင်ရွက်လာကြလေသည်။ နိုင်ငံတကာက ကြွေးမြီများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများ
အတားဆီးသည် နောက်တကြိမ် လိုသလို အာဏာသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဦးတည်မောင်းနှင်နိုင်ရန်
ကြီးမားသော အနှောင့်ယှက်များဖြစ်သည်ကို ယခု စစ်ခေါင်းဆောင်များက သင်ခန်းစာယူထားကြ
သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုတကြိမ်အာဏာသိမ်း၇န်အားထုတ်မှုသည် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားထက်
၄င်းတို့ စစ်တပ်အရာရှိတို့၏ အကျိုးစီးပွားချိန်ခွင်လျှာ အသာထွက်ရေးအတွက် ယခင်ထက်
နူးညံ့ညင်သာပြီး လူထုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ရပိုင်ခွင့်တို့သည် အာလုံးဆုံးရှုံးသွားရပြီး ၄င်းတို့
စစ်အုပ်စုကိုပင် နိုင်ငံတကာမှ ခြေလွန်လက်လွန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သော
အခြေနေများကြောင့် ထောက်ခံ ကျားကန်ပေးထားနိုင်ပါသည်။သို့သော် ပြည်တွင်း အတိုက်ခံနှင့်
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အသေးစိတ်သိမြင်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်လျှင် တိုင်းသူပြည်သားများ
အတွက် အနာဂတ်ကောင်းတခုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ သာသာကလေး တိုင်းပြည်အာဏာအား လှလှပပ
စကားလုံးလေးများဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ တဆင့်ပြီးတဆင့် အကောင်ထည်ဖေါ်
ဆောင်ရွက်လာသည်မှာ သိသာမြင်သာအောင် စူးစိုက်ကြည့်မည်ဆိုပါက အထက်တွင်
တင်ပြခဲ့သော အချက်လက်များထက်ပင် လေးနက်သော ကောက်ကြောင်းများစွာ
ရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ရပြီး….အာဏာသိမ်းဖို့ အခွင့်သာလာနေပြီလော? ဟုပင် မေးခွန်းထုတ်
This entry was posted in ပစ်စာ, မြန်မာသတင်း on March 2, 2013 by koshwehtoo.
← တစ်နပ်စားဥာဏ် စိုင်းနော်ခမ်း →